Theyrrrr baaaack… raha misy zavatra tsy mba tsy ahombiazan'ny governemanta dia manitsakitsaka tsikelikely ny fahalalahan'ny olony izany. Ny lalàna momba ny fizarana sy ny fiarovana an-tserasera (CISPA) dia ny fiverenana manaraka an'ny SOPA. Mampalahelo fa ity volavolan-dalàna ity dia tsy misy fanoherana iraisan'ny rehetra, na izany aza. Ny antony mahatonga ny orinasa sasany toa ny Facebook mahita ity volavolan-dalàna ity amin'ny fanoherana kely kokoa dia satria misy zavatra ao anatiny ho azy ireo. Araka ny filazan'ny Electronic Frontier Foundation: Ireto
Alahady, Martsa 4, 2012 Alahady, Martsa 4, 2012 Douglas Karr
Ny indostrian'ny mozika sy ny piraty, ny indostrian'ny sarimihetsika ary ny ony, ny gazety ary ny vaovao an-tserasera. Inona no itovizan'ireo rehetra ireo? Famatsiana, fangatahana ary tsena iray miova. Tena mpankafy kapitalisma aho ary miankina kely amin'ny lafiny libertarian-n'ny sehatra politika. Mino aho fa ny tsena malalaka dia matetika mahita lalana marina hifindra. Isaky ny mahita ny governemanta manenjika ny piraty, fizarana rakitra ary fanondranana an-tsokosoko aho dia mahasosotra izany.
Raha maka fotoana hisaintsainana an'io ianao dia ny Internet ihany no ampahany amin'ny toekarena amerikana mandeha tsara ankehitriny. Tsy mino aho fa misy ny mampihomehy fa io ihany koa dia ampahany iray amin'ny toekarena amerikana izay tsy natomboky ny governemanta. Tamin'ny volana lasa, nisy ny lalàna manan-danja nifidy sy namboarina izay toa hanova azy…. Amin'ny fiheverana fa mila lalàna momba ny zon'ny mpamorona bebe kokoa izahay